Scene Optimiser က ကျွန်ုပ်၏ ဓာတ်ပုံများကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ဘယ်လို စီမံပေးသလဲ? | Samsung Myanmar
Scene Optimiser က ကျွန်ုပ်၏ ဓာတ်ပုံများကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ဘယ်လို စီမံပေးသလဲ?
Scene Optimiser က အထူးပြုလုပ်ချက်နှင့် သင့်ရုပ်ပုံများ၏ အရည်အသွေးကို အလိုအလျှောက် မြှင့်တင်ပေးရန် အဆင့်ထပ်တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။
အလိုအလျောက် ရှုခင်း အကောင်းဆုံးစီမံနည်းကို အသုံးပြုခြင်း
ကင်မရာက ပုံရိုက်ခံအရာ သို့မဟုတ် ရှုခင်းကို မှတ်သားလိုက်သည့်အခါ၊ ဖန်သားပြင်တွင် အိုင်ကွန် ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးစီမံထားသည့် အရောင်ကို အလိုအလျောက် အသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်။
သတိပြုရန်- အထက်ပါ ဖန်သားပြင်ပုံတွင် Android ဗားရှင်း ၉.၀ သုံးထားသော အိုင်ကွန်၏ နေရာမှန်ကို ပြထားပါတယ်။ အစောပိုင်းဗားရှင်းကို သင် အသုံးပြုနေလျှင်၊ ညာဘက်တွင် ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။
မတူသော ရှုခင်းများ ဆိုသည်မှာ ဘာတွေလဲ?
နောက်ကင်မရာသည် မတူသော အနေအထားများ နှစ်ဆယ်ခုအကြား ရွေးချယ်နိုင်ပြီး အခြေအနေအရ ရိုက်ချက်တိုင်းဖြင့် အကောင်းဆုံး ကိုက်ညီစေသည့်တစ်ခုကို အသုံးချမှာဖြစ်ပါတယ်။
S10 ဖုန်းများတွင်၊ နောက်ထပ် ရှုခင်း ဆယ်ခု ရနိုင်ပါတယ်-
Galaxy S10 တွင် ကင်မရာအင်္ဂါရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှာဖွေပါ
သတိပြုရန်- Scene Optimiser ၏ တိကျမှန်ကန်မှုသည် ပုံရိုက်ခံအရာအမျိုးမျိုး၊ ဖိုးကပ်စ်ပြင်ပရောက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ရွေ့လျားနေသော ပုံရိုက်ခံအရာများ အပါအဝင် ရိုက်ချက်အခြေအနေများအပေါ် မူတည်၍ ခြားနားနိုင်ပါတယ်။
အလိုအလျောက် ရှုခင်း အကောင်းဆုံးစီမံနည်းကို ဖယ်ရှားခြင်း
ဤအင်္ဂါရပ်ကို ဖန်သားပြင်ရှိ ရွေ့လျားနေသော အိုင်ကွန်ပေါ် လွယ်ကူစွာ နှိပ်ခြင်းဖြင့် ပိတ်နိုင်ပါတယ်။ Scene Optimiser ကို သက်ဝင်ခလုတ်ပိတ်ထားသည့်အခါ အိုင်ကွန်က မီးခိုးရောင် ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သတိပြုရန်- အထက်ပါ ဖန်သားပြင်ပုံတွင် Android ဗားရှင်း ၉.၀ အတွက် မှန်ကန်သောအဆင့်များကို ပြထားပါတယ်။ အစောပိုင်းဗားရှင်းကို သင် အသုံးပြုနေလျှင်၊ ကင်မရာ အစမ်းကြည့်စာမျက်နှာရှိ သတ်မှတ်ချက်များ အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် သက်ဝင်ခလုတ်ပိတ်ရန် လိုအပ်ပါမည်၊ ပြီးလျှင် “Scene optimiser” ခလုတ်ကို ပွတ်ဆွဲပါ။